XOG: Fahad Yaasiin oo Kheyre uga Digay hal arrin oo uu Xilka ku weyn karo
Agaasimaha Madaxtooyada Somalia Fahad Yaasiin ayaa digniintii ugu cusleyd siiyay Ra’iisul wasaaraha Somalia Xasan Cali Kheyre kadib markii uu dhaliil ka keenay qaabkii ay xukuumadda ula wareegtay lacagtii Imaaraadka ee lagu qabtay garoonka Muqdisho.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo madaxweynaha kala hadlay qaabka ay xukuumadda ula dhaqantay Imaaraadka ayaa waxa uu u sheegay in qaabkaas ay ahayd mid lagu sumcad dilay dal dhan uu sheegay inuu soo gacan qabtay Somalia xilliyo adag.
Kheyre waxa uu tilmaamay in Imaaraadka uu yahay dal dalalka kale oo dhan uga dhow Somalia isla markaana kaalin weyn kasoo qaatay soo koritaanka iyo dhismaha dalka marka laga reebo dowladda Turkiga oo uu sheegay inay tahay walaalka koowaad ee Somalia.
Ilo ka tirsan Villa Somalia oo si hoose ula hadlay Jamhuuriyada Online, ayaa waxa ay sheegeen in agaasimaha madaxtooyada ahna wakiilka dowladda Qatar ee arrimaha Somalia Fahad Yaasiin Xaaji daahir uu Kheyre uga digay arrinta Imaaraadka iyo dhaliilaha uu ra’iisul wasaaraha u gudbiyay madaxweynaha.
Fahad Yaasiin ayaa la sheegay in Kheyre uu ku wargeliyay in dalkan aanan looga baahneyn Imaaraadka isla markaana uu joojiyo qorshaha uu mar kale xukuumadda ugu soo dhoweynayo dowladda Imaraadka.
Xogta ayaa intaa ku dareysa in Fahda Yaasiin uu Kheyre ugu hanjabay in haddii uu faraha kala bixi waayo go’aanada ay xukuumadda ka qaadaneyso arrimaha Imaaraadka iyo qaabka ay uga hortageyso siyaasadda Imaraadka uu xilkiisa ku weyn doono.
Khilaaf ka dhax taagan baarlamaanka Hirshabeelle
Wasiiru dowlaha Arrimaha Gudaha oo ku guuleystay kursigii uu ka dhintay xildhibaan Bootaan Ciise